မိန်းမရပြီးသွားရင် လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အရာ ( ၉ ) ခု - Real Gaming Myanmar
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အချိုးအကွေ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် …. ။ အများအားဖြင့်တော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါ နေထိုင်သွားလာမှု ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွားကြရပါတယ် … ။ တစ်ကိုယ်တည်း ဘဝတုန်းက နေခဲ့သလိုမျိုး အိမ်ထောင်သည် ဘဝမှာ နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး ။ အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့ အခါ အမျိုးသားတွေရော အမျိုးသမီးတွေပါ ပြောင်းလဲကြ ရပါတယ် …. ။ အမျိုးသားတွေအတွက် အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့အခါ လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အရာ ( ၉ ) ခု ရှိပါတယ် …. ။
၁ ။ တစ်ညလုံး သောက်ပြီး အလွန်အကျွံ မူးခြင်း
အရင်ကတော့ တစ်ညလုံး အရက်သောက်ပြီး အပြင်မှာ နေလို့ရပါတယ် ။ အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့အခါ ဒါမျိုး လုပ်ရင်တော့ ပြဿနာ ကျိန်းသေပေါက် တက်မှာပါ …. ။
၂ ။ နေမြင့်တဲ့ အထိ အိပ်ခြင်း
အလုပ် အားရက်လည်း နေမြင့်တဲ့အထိ အိပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။ အိမ်မှာ လုပ်စရာတွေ ပုံနေပါပြီနော် …. ။
၃ ။ ကောင်မလေးတွေနဲ့ ချက်တင် ထိုင်ခြင်း
မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က စကားပြောတာ၊ မက်ဆေ့ ပို့တာတွေ လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး … ။
၄ ။ ညစာ ထွက်စားခြင်း
အပြင်က အမျိုးသမီး မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ညစာထွက် စားလို့လည်း မရတော့ပါဘူး။ ဇနီးသည် ပြန်သိရင်တော့ ရှင်းဖို့သာ ပြင်ထားရတော့မှာပါ…. ။
၅ ။ တန်ဖိုးကြီး အဝတ်အစားနှင့် အသုံးအဆောင်များ ဝယ်ခြင်း
လူပျိုဘဝ တုန်းကတော့ သင်ဟာ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေပဲ ဝယ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိချင် ရှိပါလိမ့်မယ်။ အိမ်ထောင် ကျပြီးရင်တော့ ဘာဝယ်ဝယ် တိုင်ပင်ပြီးတော့မှ ဝယ်ရဖို့သာ များပါတယ် … ။
၆ ။ အိပ်ရာ အလယ်မှာ အိပ်ခြင်း
အရင်တော့ ကုတင် သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ မွေ့ယာ တစ်ခုလုံးဟာ သင့်အတွက် ချည်းပါပဲ ။ ဒါကြောင့် ဇောက်ထိုး အိပ်အိပ် ၊ ကန့်လန့် အိပ်အိပ် အဆင်ပြေပါတယ် ။ အခုတော့ သင်ဒီလို အိပ်လို့ မရတော့ပါဘူး …. ။
၇ ။ ခဏခဏ ခရီးထွက်ခြင်း
အရင်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မကြာခဏ ကမ်းခြေသွားကောင်း သွားခဲ့ပါလိမ့်မယ် ။ အခုတော့ ကမ်းခြေဆိုတာမျိုးကို သူမပါဘဲ သင်သွားဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူးနော် … ။
၈ ။ အမေနဲ့ တစ်အိမ်တည်းနေခြင်း
အိမ်ထောင် ကျပြီးရင်တော့ အမေနဲ့ တစ်အိမ်တည်းနေဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလောက် ပါပဲ ။ နေရင်လည်း အဆင်ပြေဖို့ မလွယ်လှပါဘူး ။ ဒါကြောင့် အမေနဲ့ တစ်အိမ်တည်း နေရတာကိုလည်း အိမ်ထောင်ကျရင် စွန့်လွှတ်ရဖို့ များပါတယ် … ။
၉ ။ ရည်းစားဟောင်း ဓာတ်ပုံများ သိမ်းထားခြင်း
သင့်ရဲ့ ရည်းစားဟောင်း ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်း သူမ မမြင်ခင် မြန်မြန် လွှင့်ပစ်ရတော့မှာပါ ။ မြင်သွားခဲ့ရင်တော့ ပြဿနာ အကြီးအကျယ် တက်ပြီလို့ မှတ်လိုက်ပါ …. ။
Source – Life
မိနျးမရပွီးသှားရငျ လုပျလို့ မရတော့တဲ့ အရာ ( ၉ ) ခု
အိမျထောငျပွုခွငျးဟာ ဘဝမှာ ကွီးမားတဲ့ အခြိုးအကှေ့ အစိတျအပိုငျး တဈခုလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ …. ။ အမြားအားဖွငျ့တော့ အိမျထောငျကပြွီးတဲ့အခါ နထေိုငျသှားလာမှု ပုံစံတှေ ပွောငျးလဲသှားကွရပါတယျ … ။ တဈကိုယျတညျး ဘဝတုနျးက နခေဲ့သလိုမြိုး အိမျထောငျသညျ ဘဝမှာ နဖေို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး ။ အိမျထောငျ ကပြွီးတဲ့ အခါ အမြိုးသားတှရေော အမြိုးသမီးတှပေါ ပွောငျးလဲကွ ရပါတယျ …. ။ အမြိုးသားတှအေတှကျ အိမျထောငျ ကပြွီးတဲ့အခါ လုပျလို့ မရတော့တဲ့ အရာ ( ၉ ) ခု ရှိပါတယျ …. ။
၁ ။ တဈညလုံး သောကျပွီး အလှနျအကြှံ မူးခွငျး
အရငျကတော့ တဈညလုံး အရကျသောကျပွီး အပွငျမှာ နလေို့ရပါတယျ ။ အိမျထောငျ ကပြွီးတဲ့အခါ ဒါမြိုး လုပျရငျတော့ ပွဿနာ ကြိနျးသပေေါကျ တကျမှာပါ …. ။
၂ ။ နမွေငျ့တဲ့ အထိ အိပျခွငျး
အလုပျ အားရကျလညျး နမွေငျ့တဲ့အထိ အိပျလို့ မရတော့ပါဘူး။ အိမျမှာ လုပျစရာတှေ ပုံနပေါပွီနျော …. ။
၃ ။ ကောငျမလေးတှနေဲ့ ခကျြတငျ ထိုငျခွငျး
မိနျးကလေး သူငယျခငျြးတှေ၊ မိတျဆှတှေနေဲ့ ဖစျေ့ဘှတျက စကားပွောတာ၊ မကျဆေ့ ပို့တာတှေ လုပျလို့ မရတော့ပါဘူး … ။
၄ ။ ညစာ ထှကျစားခွငျး
အပွငျက အမြိုးသမီး မိတျဆှတှေနေဲ့ ညစာထှကျ စားလို့လညျး မရတော့ပါဘူး။ ဇနီးသညျ ပွနျသိရငျတော့ ရှငျးဖို့သာ ပွငျထားရတော့မှာပါ…. ။
၅ ။ တနျဖိုးကွီး အဝတျအစားနှငျ့ အသုံးအဆောငျမြား ဝယျခွငျး
လူပြိုဘဝ တုနျးကတော့ သငျဟာ ဝတျကောငျးစားလှတှပေဲ ဝယျတတျတဲ့ အကငျြ့ ရှိခငျြ ရှိပါလိမျ့မယျ။ အိမျထောငျ ကပြွီးရငျတော့ ဘာဝယျဝယျ တိုငျပငျပွီးတော့မှ ဝယျရဖို့သာ မြားပါတယျ … ။
၆ ။ အိပျရာ အလယျမှာ အိပျခွငျး
အရငျတော့ ကုတငျ သို့မဟုတျ သငျ့ရဲ့ မှယေ့ာ တဈခုလုံးဟာ သငျ့အတှကျ ခညျြးပါပဲ ။ ဒါကွောငျ့ ဇောကျထိုး အိပျအိပျ ၊ ကနျ့လနျ့ အိပျအိပျ အဆငျပွပေါတယျ ။ အခုတော့ သငျဒီလို အိပျလို့ မရတော့ပါဘူး …. ။
၇ ။ ခဏခဏ ခရီးထှကျခွငျး
အရငျက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ မကွာခဏ ကမျးခွသှေားကောငျး သှားခဲ့ပါလိမျ့မယျ ။ အခုတော့ ကမျးခွဆေိုတာမြိုးကို သူမပါဘဲ သငျသှားဖို့ မလှယျတော့ပါဘူးနျော … ။
၈ ။ အမနေဲ့ တဈအိမျတညျးနခွေငျး
အိမျထောငျ ကပြွီးရငျတော့ အမနေဲ့ တဈအိမျတညျးနဖေို့ ဆိုတာ မဖွဈနိုငျသလောကျ ပါပဲ ။ နရေငျလညျး အဆငျပွဖေို့ မလှယျလှပါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ အမနေဲ့ တဈအိမျတညျး နရေတာကိုလညျး အိမျထောငျကရြငျ စှနျ့လှတျရဖို့ မြားပါတယျ … ။
၉ ။ ရညျးစားဟောငျး ဓာတျပုံမြား သိမျးထားခွငျး
သငျ့ရဲ့ ရညျးစားဟောငျး ဓာတျပုံတှကေိုလညျး သူမ မမွငျခငျ မွနျမွနျ လှငျ့ပဈရတော့မှာပါ ။ မွငျသှားခဲ့ရငျတော့ ပွဿနာ အကွီးအကယျြ တကျပွီလို့ မှတျလိုကျပါ …. ။
Previous: ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Drafting တွေနဲ့ VG ကို TI9 ကနေထွက်စေခဲ့တဲ့ Puppey
Next: အသက် ၉ နှစ်သမီးအား ကာမစပ်ယှက်၍ ဓား ဖြင့်၁၅ ချက်ထိုးခုတ်ပြီး ရေတွင်းထဲ ပစ်ချသူအား ဖမ်းဆီးရမိ